Imikhono emide I Shirt Asymetrical Cotton - Ama-Buddhatrends
I-Pink / One Size I-Navy blue / One Size Iwayini elibomvu / elilodwa Usayizi Usayizi omhlophe / owodwa
Yamukela ubuso bakho be-zen bese ubheka inhle ukwenza lokho! I-Sleeve Yethu Yemizimba Ejwayelekile Yomkhiqizo we-Cotton Yenziwe Ngomshini omuhle kakhulu wekotini futhi yenzelwe iphethini eqinile eyenza ikhono lakho lesikhumba livele kahle. Ungayibhanqa nganoma iyiphi i-jeans noma ibhulukwe oyikhethayo
Ingqikithi Yemikhono: 60CM
Fit kahle. Ukukhululeka kancane kune-navy engiyithenge ngesitayela esifanayo. Hlanza futhi ubeke esomini ukuze ubone ukuthi ngabe kuzoba kancane. Izinto eziqinile ezigeza kahle. Ngami, umbala we-pink wawunembile kakhulu kuyi-intanethi.
Umbukiso omuhle kakhulu womkhiqizo
Kuhle kakhulu futhi ukhululekile. Okuncono